IMfazwe Yehlabathi Yeyokuqala ayizange ifikelele ekubhubhiseni kuphela, kodwa nayo yabangela ukuba kuvele isitayela esidumile se-Art Deco. Yingakho le ndlela ingaqatshelwa yindalo ebiza kakhulu neyakhazimulayo. Kulo mbandela u-Art Deco luhlobo lwe-fusion ye-Neoclassicism kunye ne-Modernism, engayifuni ukukhazimulisa ngeendlela zonke, kodwa nakwezinye izinto. Iimanje zibonakalisa njengesitayela apho ubufazi, ubuqilima kunye nemigca embi, kunye nokukhawuleza. Ngako oko, isitayela se-Art Deco yindlela ehlukile kuyo.
Kule ndlela, ukugxininiswa okubalulekileyo kwinto yesimanje: ukugqithisela kunika indlela yokubaluleka, ukucaciswa okucacileyo kweefom, iipatheni zehlabathi eziqhamo kunye nezityalo zithatyathwa yimizobo engabonakaliyo kunye nobukhulu be-geometric. Ngamanye amazwi, iimbasa ze-Art Deco zizinto eziphezulu zobuchwepheshe, ingxube, ukucoceka, imigca ecacileyo kunye nejometri.
Umthombo wokukhanyisa ugesi kulesi siko yinani elikhulu elidibaniswe nokuveliswa kwakhe kweso sikhathi. Ukwakhiwa kwezakhiwo eziphakamileyo kuya kubonakala kule ndlela. Zayisetyenziswe ngabaqulunqi ukuba bahlobise amaqhekeza, izindonga nezinto zangaphakathi.
Izinto eziphambili zezinto zangaphakathi, ezenziwe ngesitayela se-Art Deco
Izinto eziphambili ze-ArtDeco, ezivumelanisa ngokufanelekileyo phakathi kwendawo yangoku:
Ukubeka izinto ngendlela yesigzag kunye nazo zonke iintlobo ezahlukeneyo kulo mbandela (ukubeka ityile kunye ne-herringbone, usebenzisa i-zigzag njengomhlobiso, njl.).
I-Sunbeams (i-Sunburst) yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ze-Art Deco. Inokufunyanwa kumhlobiso, ukuhlobisa kunye neengcango zangaphakathi. Kwiliphi igumbi kukho into enemizila emicu, enjengesifa. Umtya usetyenziswe kokubili kwintyatyambo kunye nokuhlobisa kweendonga.
Isisu. Izakhiwo zeZiggurat, iifom zee-multi-stage, ezivela kwiinkalo zobungcali bezizwe zaseAsiriya, eBhabhiloni naseSumerian, kwii-20 zee-20 zokugqibela zaphefumlela uninzi lwabaqulunqi.
Kwezinye iimeko, unokwazi ukugcina ukhetho lwesibini nolwesithathu, umzekelo, imizila eyahlukeneyo ilanga kumanyathelo.
Trapezoidism. Iifenitshala ezininzi kunye neendawo zangaphakathi zinomfanekiso ofana ne-trapezoid: izibuko, izilwanyana zezihlalo, ukuhlobisa iingcango zangaphakathi, ukuvula ii window, njl njl. Kwinqanaba elilodwa, ukuqina, i-trapeze kunye ne-sunburst iyakwazi ngokufanayo.
I-Curvilinearity. Ngokungafani namhla, ukukhawuleka kwemigca kwi-Art Deco nayo i-geometric. Ngokomzekelo, nokuba umlo wesangqa uya kuhlukaniswa ngobunzima befom.
Izixhobo zePiano. Ubuninzi bemigangatho ekhanyayo yokukhanya kunye namnyama. Kwanje i-sunburst ekhankanyweyo iyenziwa ngokusebenzisa umbala okhanyayo kunye nomnyama, njengokungathi ugxininise kwisixhobo somculo.
Umnqophiso kunye nesakhelo. Kwindlela yesitayela se-Art Deco, ngokukhawuleza ukulungiswa kwenani elikhulu leendawo kusetyenziswe, okuhlukileyo kumxholo walo. Ukusetyenziswa kweli cwangciso kusenza sikwazi ukufezekisa ubuchule obukhethekileyo beendlela, kwaye sigxininise kwijometriji yesitayela seDet Deco.
Imibala esetyenziswayo kwisitayela se-Art Deco
Ukungathathi hlangothi sisiseko sombala we-gamut walolu hlobo, Umbala omdaka, unobumba obomvu nolumnyama, kunye nombala omnyama, umhlophe kunye nesiliva, njengendlela eyahlukileyo yombala wensimbi kunye ne-shades ye-tan. Ukungena eminye imibala kunzima kwaye ngokuyininzi i-burgundy, igolide, eluhlaza okomvu, obomvu nokuluhlaza. Ngokuqhelekileyo, umbala welitye, umhlaba kunye nesikhumba semvelo ngumdlalo.
UkuDumisa kweDock Deco
Indlu yangasese kunye nendawo yokuhlambela ingahlobiswa ngotshintsho oluphambili, i. iileyile ezimnyama kunye ezimhlophe. Isithambiso esingaphantsi kwekhitshi singenziwa kwisigzag kwifom yeeskimu ezimbini zombala, kunye nangendlela ye-chessboard ekhethiweyo. Kwindlu yokuhlambela, umbala weemabula ukhangeleka.
Iindonga zamagumbi zinokuthi zifakwe iphepha lodonga kumgca okanye enye ithoni yombala ongathathi hlangothi kunye nephethini okanye i-geometric pattern. Kwakhona, isitayela se-Art Deco sisebenzisa iipaneli zokhuni okanye ukuxelisa. Unokusebenzisa kwakhona umzobo weendonga kwiigzags okanye kwiindawo ezibanzi.
Njengesiqulatho seyona ndlela ibhetele isebenzise ibhodi yeparket. Kwamagumbi apho ifenitshala enhle ifanelekile njengendawo yokugubungela phantsi, kwaye le yimizila, igumbi, i-veranda, indawo yokuhlambela kunye ne-lobby, ingafakwa kunye nemigcobo emnyama. Kwikamelo elilodwa elikhethiweyo, unokwenza umgca omkhulu wendawo yokugubungela phantsi, usebenzisa umdibaniso wemibini emibini okanye i-linoleum kwinqanaba elibanzi kakhulu.
Ukufakwa kwesilondolozi kusenziwa kumanyathelo amaninzi kwaye kugxininiswa ngamathala amaninzi. Ngokuhambelanayo kuya kukhangela i-curbs eludongeni kunye nakwindawo, ukudala i-geometri ecacileyo, ebonakalayo isitayela esibuzwayo.
Ukuze ukhethe nje isitayela se-Art Deco, kunokwenzeka ukuba unike imizobo ye-trapezoidal kwiintlanzi kunye neesahlulo, ukuhlobisa iingcango ngokufaka i-geometric kunye neendlela, kunye neendlela ezihambelana nomnyango. I-stucco esebenza kakuhle ihlala ithatha isitayela se-Art Deco.
Ifenisha yesitayela se-Art Deco
Ifenitshala kulolu hlobo ingaba neenkonkco zombini kunye nesikhumba. Kodwa ukuma kweembuyiselo, izihlalo zentonga okanye i-sofas ziyakwazi ukugqithisa, i-trapezoidal okanye yonke into eyenziwa ngemibhobho. Ngokubhekisele kumcwangcisi wemibala, kunokuthi kube yinto ethile, okanye uxelise, umzekelo, umbala we-zebra okanye i-upholstery jikelele kunye nomhlobiso wejometri.
Ukuhlala kumagumbi esifuba, iziseko kunye neekhabhinethi ziphawuleka kakhulu kwi-Art Deco. Ngokuqhelekileyo ezi zinto zihlambulukileyo, ezibonisa ukukhanya okanye ukusetyenziswa kwepeyinti.
Igumbi lokulala lingaba ngumbhede nge-multi-stage, ibhola okanye uhlobo lwe-trapezoidal. Olu hlobo lungaqwalaselwa kwindlela yokwakhiwa kwezifuba, iibhobhodi, iindonga, i-console okanye i-sofa backs.
Ifenitshala inokwenziwa ngesinyithi okanye ngeglasi, ibe nomzobo wesibuko, kwaye ibekwe kumgangatho wendlela kunye nangendlela yamanyathelo.
Umhlobiso kwisitayela se-Art Deco
Kusebenza kwanamhlanje, i-Art Deco isebenzisa isibalo esikhulu sezibane kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhanyisa. Izibane zetekisi ze-Art-Deco ngendlela yombhobho, izibuko ngendlela yeemithi, ilanga okanye amanqanaba aza kugxininisa ngokupheleleyo isitayela se-Art Deco. Ingaphakathi lingagcwaliswa ngamashishini angaphandle kunye nomfanekiso welanga, imilo yejometri okanye imichilo emhlophe kunye emnyama.
Kwakhona, ingaphakathi lingabonwa ngento yokuhlobisa imbala ye-zebra, eya kuba khona kwi-tapestries, i-plaid or pillows. Kodwa umoya wexesha elidlulileyo, unokuziva ukhangiso lwentengiso, imifanekiso yezakhiwo kunye neefowers zokuhamba.
I-Art Deco inokuqatshelwa ngokukhawuleza ngeemifanekiso zamantombazana amancinci omdlalo wezemidlalo ekwakheni kwimidlalo yezemidlalo okanye kunye nezixhobo zemidlalo. Ukuhlobisa okungaqhelekanga okuvela e-Afrika, iYiputa yaseYiputa, iGrisi kunye nayo yonke into ephathelele kuma-Aztec iya kulungeleka.
Iindonga zihlotswe ngepeyinti engumxholo we-jungle, iidonga nezinye i-exotics kunye nepeyinti. Kwaye bhetele kungcono ukusebenzisa imibala ye-monochrome kunye neendwangu ezimhlophe.
Imigaqo eyisiseko yekhitshi ye-ergonomic
Indlela yokwenza ikhaya elihle kwizandla zakho
Senza ibhola lomnyaka omtsha kwindlela yokucoca i-Decoupage-master class with stages-by-step photos
Isitayela se-Antique ngaphakathi
Iindlela zokwahlula abantu
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo zokugqoka
Indlela yokuzikhusela kubundlobongela basekhaya
Ukunyamekela kweentyatyambo zendlu: izilwanyana